﻿ ‘वडालाई कर्मचारी र पूर्वाधारको समस्या छ’
सु्नसरीको इटहरी वार्ड नं. १९ इटहरीकै ग्रामिण वडामा पर्छ । थारु, चौधरी तथा जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेको यो वडामा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका काम अघि बढिरहेको छ । तर समस्याहरु पनि छन् । वडाको काम, योजनाको विषयमा वडाध्यक्ष नारायण चौधरीसँग न्युजलयकी सरिता भण्डारीले लिएको अन्तर्वार्ता :
अहिले हामी अपांगता भएकाहरुलाई न्यानो कपडा वितरणमा लागेका छौँ । अहिलेसम्म ८०÷९० जना जति अपांग व्यक्तिहरुलाई कपडा वितरण गरिसकेका छौँ । अनि हामीले भर्खरै उपभोक्ता समिति गठन गरेका छौँ । र उहाँहरुसँग विकासका कामहरु सम्झौता गर्नको लागि पत्र बनाएर पठाउँदै छौँ ।
यो वडाको विकासको अवस्था कस्तो छ ?
विकासलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । खासगरी सडकहरु प्राथमिकतामा छन् । हामीले सैनिक चोकमा दुइ लाखको लागतमा करिब ९० मिटर कालोपत्रे गरेका छौँ । त्यस्तै वडा कार्यालयको छेउमा ५ लाखको लागतमा करिब ५० मिटर जति कालोपत्रे गरिसकेका छौँ । हामीसँग रहेको बजेटको ५ लाख रुपैया त्यस मध्येमा पनि १०/१२ लाखको हामीले कोरियन चोकदेखि तलसम्म २२ टिपर मिसगिटिहरु हालेका छाँै । त्यस्तै जब्दि मा.वि देखि १८ नं. को बोर्डरतर्फ जाने बाटोमा पनि ५२ टिपर जति मिसगिटी हालेका छौँ ।
वडाको कुन कुरालाई तपाईले पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
यो आर्थिक वर्षमा हामीले १६ फुटे बाटो एक किलोमिटर पृथ्वी चोकदेखि माहुलिया चोकसम्म स्तरोन्नती गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।
तपाईलाई कर्मचारीहरुले कत्तिको सहयोग गरिरहेका छन् ?
म कर्मचारीहरुबाट सन्तुष्ट छु । सबैले मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । उनीहरु समयमै कार्यालय आइरहेका छन् । तर कर्मचारीको अभाव भने रहेको छ । एक जना मात्र सचिव हुनुहुन्छ । उहाँ कार्यालयमा नहुँदा एक जना मात्र खरदार बस्नु हुन्छ । र एक जनाले मात्र कुन काम गर्ने भनेर समस्या छ ।
कार्यालयको कर्मचारीबाट सन्तुष्ट भएपनि कर्मचारीको अभाव भने रहको छ ।
यो वडा इटहरीको ग्रामिण क्षेत्रमा पर्छ । यहाँ जनजाति समुदायको सहभागिता पनि धेरै छ, यहाँ झै–झगडाका केशहरु कत्तिको आउँछन् ? कुन केश चाहिँ बढी आउँछ ?
यहाँ घर परिवार बुढाबुढीहरुको पनि झै–झगडाको केश आउँछ र विशेष गरेर जग्गा जमिनको पनि केशहरु आइरहका छन् । अहिले यस्तो अवस्था आयो, आजभन्दा २० वर्ष अगाडी चार पाँच कठ्ठा कसैले कसैको जग्गा खाइरहेको छ, त्यतिबेला मतलब थिएन तर अहिले आएर इन्च इन्चको पनि कुरा आउन थालेको छ । त्यसैले अहिले जग्गा जमिनको पनि धेरै केशहरु आइरहेको छ । त्यस्तै यहाँ लेनदेनको पनि केशहरु आउने गर्छन् ।
यो वडाको मुख्य समस्या चाहिँ के हो ?
वडाको मुख्य समस्या भनेको वडाको आफ्नै कार्यालय हामीसँग छैन । हामीले अहिले घर भाडामा लिएर काम गरिरहेका छाँै । त्यस्तै बाटोहरुको समस्याहरु पनि छन् तर पनि हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हामीसँग वडा कार्यालयहरु छैनन् । तर वडा कार्यालय बनाउनको लागि हामीसँग १ विगाह ७ कठ्ठा ऐलानि जग्गा भने हामीसँग छ ।
यो वडाको विकास गर्नको लागि के गर्नु पर्ला ?
अहिले वडाको विकासको लागि बजेटको अभाव रहेका छ । यो तीन वटा वडाहरु मर्ज भएर बनेको एउटा वडा हो । त्यसैले हामीलाई बजेटको कमि रहको छ र यसको लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
हाम्रो यो वडाको समस्यालाई नगर र प्रदेशले बुझेर त्यस अनुसारको बजेट उपलब्ध गराओस् भन्न चाहन्छु ।